Ilhaan Cumar oo ka hadashay waxay isku seegeen madaxweyne Donald Trump | Mandheera News
April 27, 2019 - Written by mandheera news
Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan Aqalka Wakiillada ee waddanka Mareykanka ayaa sheegtay inay in muddo ahba is-hayeen madaxweyne Donald Trump.
Waxa ay sheegtay inay arrintaasi salka ku hayso khilaafka Trump kala dhaxeeya Muslimiiinta, soo galootiga, haweenka iyo dadka madowga ah.
Ilhaan oo xaafad ka mid ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee laga soo doorto kula kulantay qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa sheegtay in halista amni ee ay wajahayso uu madaxweyne Trump ka dambeeyo.
“Halistaas waxaan u malaysanayaa in dadka badanaa ay dareemi karaan in sida madaxweynaha uu u hadlaayo inay keentay.” ayey tiri.
“Dadka hadda xabsiga daraadey ugu jira oo rabay inay aniga I dilaan kuligood waxay dhaheen madaxweynaha ayaan taageersannahay oo madaxweynaha magaciisa ayaan rabnaa inaan Ilhaan ku dilno.”
Trump halis ayuu dad badan galiyay
Ilhaan waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump uusan kaligeen halis galinee uu sidoo kale halis galiyay dadka iyada ay matasho iyadoo tiri: “wuxuu halis galiyay dadka qaxootiga ah ee raba inay waddankan [Mareykanka] soo galaan, halista uu galiyay dadka Muslimiinta, halista uu galiyay dadka madowga iyo dumarka sida uu uga hadlo halista ay keenayso.”
Baaqa Trump ee iscasilaadda Ilhaan Cumar
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa bartamihii bishii Febraayo waxa uu ugu baaqay Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Kongreska Mareykanka, inay iscasisho, kaddib markii ereyo “Yuhuud naceyb” ah ay ku qortay barteeda Twiter-ka.
Waxaa kale oo uu sheegay in raali gelintii ay bixisay Ilhaan Cumar ay tahay mid daciif ah, oo waxaaa uu intaa raaciyay in hadalka kasoo yeeray Ilhaan uu yahay mid ay si weyn u aaminsan tahay.
Madaxweyne Trump oo ka hadlaya kulan ay lahaayeen Kooxda Hoggaamisa siyaasadda Yuhuudda Xiligii uu madaxweyne Trump ku jiray ololaha doorashada, waxaa aad loo xusuusta hadal uu ka yiri Soomaalida ku nool Mareykanka oo ahaa in falal argagixiso ay kusoo kordhiyen Minnesota, oo haddii la doorto uu ka hortagi doono qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriinta Soomaalida.